Dood Cilmiyeed: warbaahinta iyo hey’adaha amniga | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dood Cilmiyeed: warbaahinta iyo hey’adaha amniga
Dood Cilmiyeed: warbaahinta iyo hey’adaha amniga
Dood Cimiyeed ku saabsan sida ay u wada shaqeyn karaan hey’adaha ammaanka iyo warbaahinta Soomaaliyeed oo ay ka qeyb-galeen wasiirro ka tirsan Xukuumadda iyo saraakiil ka kala socotay hey’adaha Xafiiska Midowga Yurub, hey’adda ALBANY iyo Machadka cilmi-baarista Soomaaliyeed ee u adkeysiga dhibaatooynka, SDRI.
Ka hor dood cilmiyeedka ayaa lagu soo bandhigay madasha Cilmi-baaris laga sameeyey gobollada Banaadir, Baay iyo Mudug, taas oo ku aadaneyd saameynta Warbaahinta iyo Hey’adaha amniga ay ku leeyihiin arrimaha Federaalka iyo isqab-qabsiga dhulalka oo gobollada Soomaalida aad.
Dhinaca kale Dood Cilmiyeedka ayaa diiradda lagu saaray sida ugu habboon ee xoogga loo saari karo isku xirka hey’adaha amniga iyo Saxaafadda, isla markaana sare loogu qaadi lahaa xiriirka wada shaqeyn ee hey’adahaas ka dhaxeeya.
Ku xigeenka Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Tom Even, ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay wada shaqeyn hey’adaha warbaahinta iyo kuwa amniga, taas oo sare u qaadeysa himilada shacabka ee dhinaca horumarka.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Amniga Gudaha Mudane C/naasir Saciid Muuse, ayaa sheegay in wasaaradda amniga ay ka go’an tahay in ay wada shaqeyn la yeeshaan warbaahinta Soomaalida, isla markaana ay ku howlan tahay wasaaraddu sameynta xarun xiriirisa iyaga iyo warbaahinta si amniga iyo horumarka looga wada shaqeeyo.
Wasiirka Warbaahinta & Hannuuninta Dadweynaha Xukuumadda Soomaaliya, mduane Eng C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisow) ayaa sheegay in wasaaraddu ay xoogga saari doonto sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga iyo aqoonta suxufiyiinta Soomaaliyeed, si ay danaha dalkooda ugu adeeggaan .
Ugu dambeyn xubnihii dood cilmiyeedka wadagay ayaa soo bandhigay Qataraha la xiriirra wararka deg degga ah ee lagu qoro baraha bulshada (Social Media) iyo kuwa laga soo tebiyo goobaha dagaallada oo intaba halis ku ah nafta suxufiyiinta iyo amnigooda.
Previous articleRa’iisul Wasaare Khayre oo dhiirigeliyey Ciidankmada Howlgalka Muqdisho oo hub soo qabtay
Next articleQunsulka Soomaaliya ee Yeman oo sheegay in dhowaan la aasi doono meydadka dadkii doonta lagu duqeeyay